Ukuphupha ngobhontsi wokufunxa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukufunxa ubhontsi ngumkhwa weentsana kwaye ngamanye amaxesha nabantwana abancinci. Bafaka izithupha zabo emilonyeni yabo ukuze banye okanye bamunce. Isizathu soku yingqondo yokufunxa ezalwa ngaphakathi esebenza kwangoko xa kuchukunyiswa imilebe okanye incam yolwimi.
Oku kuvumela ukubonelelwa kokutya kwiinyanga zokuqala zobomi. Kwixesha elide kwimbali yeyeza, ukuncanca ubhontsi kuye kwahlulwa njengezinto ezinobungozi kunye nokuziphatha kwaye kuye kwachazwa njengesifo se-nervous. Nangona kunjalo, ngoku kukholelwa ukuba ngamava okuncanca omntwana amkhokelela ekubeni aqhubeke nokuncanca ubhontsi kamva. Uxolo nokhuseleko oluvayo emntwaneni xa esela ebeleni, uzama ukufikelela kwakhona, ngakumbi kwiimeko zoxinzelelo, ukuncanca izinto okanye ubhontsi.
Fumanisa kweli nqaku ukuba kuthetha ukuthini ukuncanca ubhontsi njengophawu lwephupha.
1 Uphawu lwephupha «ukufunxa ubhontsi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «ukufunxa ubhontsi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukufunxa ubhontsi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukufunxa ubhontsi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ubhontsi uhlala unxulunyaniswa nobuchule kunye namandla kuphando lwamaphupha. Ukuba iphupha lifunxa ubhontsi, oku kubonisa a isenzo esihle oya kuyiphumeza kungekudala. Nangona kunjalo, ukuba iphupha linobhontsi omnye kuphela wokuncancisa, ngekamva eliqinisekileyo linokuyisongela.
Ukuba ukuphupha kumunca ubhontsi wakho kuba kubuhlungu kwaye unenxeba, ke oku kuyabonisa ubunzima bobungcali phantsi. Ngokwesiqhelo emva koko ilahleko yeshishini isoyikisa, iphupha alizukuziphatha kakuhle, kwaye oogxa bakho baya kukubangela ingxaki.
Kodwa inokwenzeka nakwi el mundo amaphupha athi umntu ophuphayo afune ukuncanca ubhontsi wakhe aze aqonde ukuba akananto. Lo mfanekiso wephupha ufuzisela ukubekwa wedwa yokuphupha ibhengeza iingxaki nobunzima.
Isimboli yephupha «ukufunxa ubhontsi» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuncancisa ubhontsi kuhlala kubhekiswa kuko kutoliko lwengqondo lwamaphupha njenge Baleka ungene ebuntwaneni itolikwe. Kuba ngumkhwa oqhelekileyo wabantwana abancinci, lo mfanekiso uphupha ubonakalisa umnqweno wokuphupha kwesi sigaba sobomi babo.
Kuba ukufunxa ubhontsi ngumkhwa ogwetywa ngokungalunganga, lo mfanekiso wephupha ungabonisa uloyiko oluthile. Ngokwesiqhelo olu loyiko lu Iintloniohlangabezana nokuphupha, kuba yenza into engafunekiyo.
Abanye babahlaziyi be-psychoanalysts babona uphawu lokuphulula amalungu esini kunye nesithupha esincancayo ephupheni Ukuphulula amalungu esininjengoko becinga ukuba ukuncanca kobhontshisi kunika ulonwabo ngokwesondo. USigmund Freud ubona ubhontsi njengophawu lwenkanuko yesini kwaye ke naye udibanisa ubhontsi wokufunxa kunye nomnqweno wephupha lokuphulula amalungu esini.
Uphawu lwephupha «ukufunxa ubhontsi» - ukutolika kokomoya
Ukuncanca umnwe kukuchazwa kwamaphupha okomoya njengokubuyela kwi ebuntwaneni Itolikiwe